Kuongororwa kwenzvimbo yekusimudzira yemusika weiyo nhumbi yekugadzira indasitiri mu2020
Inotungamirwa nekusimudzira hupfumi hwepasirese uye kudiwa kwemusika, indasitiri yemitoro yenyika yangu yakawedzera nekukurumidza mumakore gumi apfuura, uye kudiwa kwemusika kuri kuwedzera kwaunza makambani mazhinji emitoro munzira yekukurumidza kukura. Kubva pakuona bhizinesi modhi, iyo yekumba lug ...
Sei kuwana kwakarurama chitaurwa yenyu bhegi chirongwa?
Vatengi vazhinji vari kutsvaga mafeketi emabhegi vanotarisira kuwana makotesheni akajeka nekukurumidza sezvinobvira kune avo mabhegi akagadzirwa. Nekudaro, nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, zvinonetsa kuti vagadziri vakupe chaiyo yakadzokororwa kota pasina sampuro kana bhegi ruzivo. Muchokwadi, pane nzira yekuwana ...
Ini ndinotenda munhu wese achasangana nedambudziko rehuwandu hwehuwandu hwehuwandu paanotsvaga vagadziri kuti vagadzirise mabhegi esaga. Nei fekitori yega yega iine chinodikanwa cheMOQ, uye chii chakaringana hushoma hwehodhi mumabhegi ekugadzirisa indasitiri? Iwo mashoma odha huwandu hwekuchengetwa ...
Nzwisisa bhegi rekugadzira maitiro mumineti
Kutaura nezvekugadzira mabhegi, vanhu vazhinji vanogona kufunga kuti nzira yekugadzira yemasaga uye mbatya yakafanana, mushure mezvose, michina yekusonesa inoshandiswa kune ese ari maviri. Muchokwadi, iyi pfungwa haina kunaka. Pane musiyano wakakura pakati pechinhu chehombodo uye zvipfeko. Mune co ...
Yakasarudzika LOGO hunyanzvi hwehombodo
Iyo LOGO yekudhinda nzira mune bhegi kurongedza idambudziko rinowanzo sangana naro. Kuti usimbise tsika yemubatanidzwa uye kuratidza mufananidzo wekambani, kudhinda kweLOGO kwakakosha zvakanyanya. Kunyanya, dhizaini yemamwe makambani akaomesesa uye inoda kuitiswa wit ...